Nagu saabsan - Chengdu Zhihongda Nonwoven Bag Co., Ltd.
Chengdu zhihongda nonwoven bag Co., Ltd. oo la aasaasay 2013, waxay ku taalaa Chengdu, koonfur galbeed Shiinaha, inta badan waxay ku hawlan tahay bacaha aan tolmo lahayn, bacda suufka, bacaha weelka, bacaha polyester, bacda la laaban karo, bacda laminated, bacda wax lagu dhejiyo, boorsooyinka qabow, bacaha dharka, alaabada kale ee aan tolmo wanaagsan lahayn iyo wax soo saarka baakadaha eco. Waa shirkad wax soo saar isku dhafan naqshadeynta, R & D, wax soo saarka bacaha iyo adeegga, iyo bixinta xalal bacda Eco oo isku dhafan.
Waxaan leenahay in ka badan 10 sano oo waayo-aragnimo xirfadeed ah soosaarka Eco-bacaha. Waxaan ku siineynaa bacaha Eco-ka suuqyada maxalliga ah waxaanna u dhoofinnaa suuqyada dusha sare, sida Yurub, Ameerika, Kanada, Australia, Japan, Singapore, iwm, Waxaan nahay koox xirfadlayaal ah amarradaada OEM ODM. Wixii amarrada OEM, waxaan kaa caawin karnaa inaan sameyno dhammaan howlaha wax soo saarka, laga soo bilaabo fikradda illaa sheyga ugu dambeeya, si habsami leh; amarrada ODM, waxaa jira xulashooyin badan oo adiga kugu habboon.
Boorsooyinkeennu waa kuwo jawi-saaxiibtinimo leh oo adkeysi leh, waa qaab xayeysiis wanaagsan oo waddada ku yaal. Boorso naqshad gaar ah ayaa kuu keeni doonta faa'iidooyin aan dhammaad lahayn oo ka imanaya dhiirrigelinta iyo aasaaska astaanta, had iyo jeer waxay xoojisaa astaantaada’s image marka la isticmaalayo. Shirkaddayadu waxay ku adkeysaneysaa inay isticmaasho hababka daabacaadda bey'adda u fiican iyo dib-u-warshadaynta & dhar dhaadheer oo loogu talagalay boorsooyinkeenna.
CHENGDU ZHIHONGDA waa inuu noqdaa TOP ONE warshadaha bacaha bey'ada. Hadafkeenu waa inaan siino boorsooyin tayo fiican leh qiime macquul ah macaamiisha kala duwan ee adduunka. Hadafkeenu waa inaan ka caawinno macaamiisheenna sidii ay u dhisi lahaayeen summad sumcad wanaagsan iyo ilaalinta deegaanka. Waxaan jeclaan laheyn inaan aqbalno baahiyaha iyo fikradaha kala duwan ee macaamiisheena, si aan u sii horumarino boorsooyinka cusub ee bey'ada ee macaamiisheena. Waxaan u fidinaa adeegyo xirfad leh macaamiisheenna si aan u badbaadino waqtigooda iyo kharashkooda.
Chengdu zhihongda waxay leedahay bacaha bey'ada oo dhammeystiran oo qalabka lagu sameeyo, waxay ku raad joogtay qaab wax soo saar toos ah oo caqli badan iyo qaar tolmo gaar ah lagu tolay. Waxay soo saartay sagaal mishiin daabacaadda midabaynta, mishiinka dahaarka leh, dhammaan noocyada mashiinnada tolidda, qiyaastii 106 shaqaale daabacaadda shaashadda xariirta ah iyo shaqaalaha tolidda.
Kooxdayada iibku waxay si buuxda uga warqabtaa macaamiisheenna baahiyaha shakhsi ahaaneed ee shakhsi ahaaneed, sida cabbirka boorsada eco, astaanta & daabacaadda qaabka, xulashada dharka, Xulashada Nidaamka, iyo wixii la mid ah. Waxaan la shaqeynaa macaamiisheenna si aan sida ugu fiican u qabanno. Waqtiga bixinta waa mid aad muhiim noogu ah, maxaa yeelay kama maarmi karno macaamiisheenna taariikhaha ay isticmaalayaan. Xaaladda degdegga ah ee soo-saarka, waxaan sidoo kale la socodsiin doonnaa macmiilka waqtigiisa.
Dhowr sano ka hor, baayacmushtariyaasha adduunka oo dhan waxaa loo adeegsaday inay siiyaan macaamiisha bacaha balaastigga ah ee bilaashka ah. Isticmaalka noocan ah ee bacda balaastigga ah way adagtahay in la xaalufiyo boqol sano waxaana lagu tilmaamay "wasakh cad". Jacaylka dabeecadda iyo bacaha cowska, waxaan aasaasnay ​​shirkadda "Zhihongda" si ay u siiso bacaha bey'ada u habboon.
Magaca shirkadeena "Zhihongda" wuxuu rajeynayaa inaan wada-abuuri karno jawi wanaagsan oo lagu noolaado, si loo gaaro hadafka shirkadeena.
Nolosheena maalinlaha ah waxay abuurtaa wasakheynta deegaanka. Waa masuuliyadeena waa inaan yareyno wasakheynta deegaanka. Soo saarista iyo soo bandhigida alaabada cusub, waxaan marwalba fiiro gaar ah u leenahay arinta deegaanka. Sanadihii la soo dhaafay, waxaan la kulanay dhibaatooyin badan waxaanan uga mahadcelineynaa taageerada macaamiisheena.
Macnaha Bacda Eco
Boorsooyinka bey'ada ku habboon ayaa loo qaabeeyey oo loo soo saaray Reuse, Dhimista iyo Dib-u-warshadaynta.
Dib u isticmaal
Bacda nonwoven: guud ahaan, hal bac ayaa dib loo isticmaali karaa in ka badan 100 jeer.
Bacda cudbiga ah: guud ahaan, hal bac ayaa dib loo isticmaali karaa in ka badan 200 jeer.
Canvas Bag: guud ahaan, hal bac ayaa dib loo isticmaali karaa in ka badan 400 jeer.
Bacda linenka: guud ahaan, hal bac ayaa dib loo isticmaali karaa in ka badan 500 jeer.
Bacda Isku-laabma: guud ahaan, hal bac ayaa ka badnaan kara 300 jeer.
Bacda Nylon qaro weyn: guud ahaan, hal bac ayaa dib loo isticmaali karaa in ka badan 500 jeer
Bacda Dahaadhay Nonwoven: guud ahaan, hal bac ayaa dib loo isticmaali karaa in ka badan 200 jeer.
Dahaaray leh tolmo wanaagsan Bag: guud ahaan, hal bac ayaa dib loo isticmaali karaa in ka badan 300 jeer.
Bacda Dahaarka leh: guud ahaan, hal bac ayaa dib loo isticmaali karaa in ka badan 30 jeer.
Bacda Shiraaca Cadka: 100% wax dabiici ah, waxay noqon kartaa nooleynta ugu dambeysa marka la tuuro.
Bacda linenka: 100% wax dabiici ah, waxay noqon kartaa nooleynta ugu dambeysa marka la tuuro.
Boorsada Kraft Paper: 100% wax dabiici ah, waxay noqon kartaa nooleynta ugu dambeysa marka la tuuro.
Bacda nonwoven: Waxyaalaha PP aan sun lahayn oo aan ur lahayn, waa la xaalufin doonaa ilaa 3 bilood ka dib marka la tuuro, waxay bilaabmaysaa hoos u dhigid waxayna noqota budo waxayna la midoobaysaa dabeecadda 12 bilood ka dib.
Bacda dahaadhay: Ma aha wax sun ah oo aan udgoon lahayn PP, waa la xaalufin doonaa ilaa 5 bilood ka dib marka la tuuro, wuxuu bilaabmaa inuu sii xumaado oo uu noqdo budo oo uu ku biiro dabeecada 18 bilood kadib.
Bac aan tolmo wanaagsan lahayn: 10% -30% ee maaddooyinka waxay ka yimaadaan maaddooyinka PP ee dib loo warshadeeyay. Weli dib ayaa loo isticmaali karaa haddii si fiican loo maareeyo.
Boorsooyinka xidhxidhan: 20% -50% ee maaddooyinka waxay ka yimaadaan maaddooyinka PP ee dib loo warshadeeyay. Weli dib ayaa loo isticmaali karaa haddii si fiican loo maareeyo.
Boorsooyinka PET: 80% -100% maaddooyinka waxay ka yimaadaan dhalooyinka caagga ah ee dib loo warshadeeyay. Weli dib ayaa loo isticmaali karaa haddii si fiican loo maareeyo.
TUSAALE LACAG LA'AAN Waxaan rajeyneynaa inaan helno shuruudahaaga gaarka ah, shaybaarada iyo daabacaadda qaabeynta. Fadlan isla markiiba la xiriir kooxdayada xirfadleyda ah!